आज कसले छरिदेला भम्पाको चिहानमा उनले पोको पारेर राखेको आफु जन्मेको देशको माटो ?
केहीबेर अघि मेयर बालेन शाहको सचिवालयले गर्यो यस्तो घोषणा
काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाले आज आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दैछ । आइतबार दिउँसो ३ बजे राष्ट्रिय सभा गृहमा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने भएको हो । महानगरका मेयर बालेन्द्र
अमेरिकाले नेपाली सेनामार्फत एसपीपी अघि बढाउन खोज्नु गम्भीर भन्दै प्रचण्डका यी विश्वास पात्र गर्जिए
काठमाडौं, ४ असार नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय कार्यालय इन्चार्ज वर्षमान पुन अनन्तले अमेरिकाले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) नेपाली सेनामार्फत अघि बढाउन खोज्नु गम्भीर विषय भएको टिप्पणी गरेका छन् । परराष्ट्र
प्रियंकाले जितिन् यो वर्षको मिस नेपालको ताज
काठमाडौं । प्रियंका रानी जोशीले यो वर्षको मिस नेपालकोृ ताज जितेकी छिन् । शनिबार ललितपुरको गोदावरीमा सम्पन्न ग्रान्ड फिनालेमा जोशीले उपाधि जिेकी हुन् । जोशीलाई मिस नेपाल नम्रता श्रेष्ठले ताज
भाइरल मन्त्री प्रेम आलेको अभिव्यक्तिपछि माधव नेपालको पार्टीमा गयो भूकम्प, किन यसरी सँधै विबादमा आइरहन्छन् प्रेम आले ?
बायुसेवा सञ्चालक संघ नेपाल र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आले बीच खटपट सुरु भएको छ । यो खटपट असार १ गते मन्त्री आलेले संंसदमा दिएको अभिब्यक्ति बाट सुरु
केपी ओलीविरुद्ध ठाडै खनिएका बामदेवले देउवालाई पनि छाडेनन्, भने एसपीपीबाट अलग हुँदाको पिडाले देउवा संसदमा आउन सकेनन्
काठमाडौं ३ असार । राष्ट्रिय सभाका सांसद नेता वामदेव गौतमले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि टिप्पणी गरेका छन् । राष्ट्रिय सभा बैठकमा स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी)का सन्दर्भमा बोल्दै नेता गौतमले प्रधानमन्त्री देउवा
एसपीपीको विषयमा राष्ट्रिय सभामा प्रधानमन्त्री देउवाको जवाफ मागियो
काठमाडौं ३ असार । राष्ट्रिय सभा सांसद रमेशजंग रायमाझीले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी)को विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जवाफ दिनु पर्ने बताएका छन् । शुक्रबार बसेको राष्ट्रियसभा दोस्रो बैठकमा नेता
एमालेले गर्यो राष्ट्रियसभाको बैठक अवरोध
काठमाडौं ३ असार । नेकपा एमालेले राष्ट्रियसभाको बैठक अवरोध गरेको छ । आज बस्ने राष्ट्रियसभाको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विनियोजन विधेयकमाथि २०७९ विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव
नेपाल एयरलाइन्सका अध्यक्षमाथि गालीगलौज गर्दै हातै हाले भाइरल मन्त्री प्रेम आलेले
काठमाडौं । विबादित मन्त्री हुन् प्रेम आले । पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेले नेपाल एयरलाइन्सका अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई हातपात गरेका छन्। मन्त्री आलेले आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर हातपात गरेका हुन् । मन्त्री आलेले
न्युज कारखाना, काठमाडौं, २ असार नेपाली सेनाले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी)मा सहभागी हुन २०७२ सालमा नै अमेरिकालाई पत्र लेखेको पाइएको छ । बिहीबार सार्वजनिक भएको पत्रमा सेनाले २०७२ कात्तिक